Fariintii Uu Kylian Mbappe U Diray Tababare Thomas Tuchel Markii Laga Ceyriyay PSG | Laacibnet.net
Fariintii Uu Kylian Mbappe U Diray Tababare Thomas Tuchel Markii Laga Ceyriyay PSG
Xiddiga Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ayaa uga mahadceliyay Thomas Tuchel inuu qoray qeyb cajiib ah oo ka mid ah taariikhda kooxda isagoo sheegay inaan cidna ilaawi doonin waqtigii tababaraha Jarmalka.
47 jirkaan ayaa afar koob oo maxali ah ku guuleystay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay isagoo sidoo kale ku hogaamiyay finalka Champions League afar bilood ka hor laakiin waxaa la ceyriyay shalay iyadoo Mauricio Pochettino ay u badan tahay inuu ka bedelayo shaqada garoonka Parc des Princes.
Kooxda difaacaneysa horyaalka Ligue 1 ayaa si niyadjab leh ku bilaabatay xilli ciyaareedkan iyagoo haatan ku jira kaalinta seddexaad waxayna hal dhibic ka hooseyaan kooxaha hogaanka isla haya ee Lyon iyo Lille ka dib markii ay 4-0 kaga soo badiyeen Strasbourg habeenkii Arbacada.
Kaliya isbuucaan, Tuchel wuxuu qirtay inuu ka careysnaa in guulihiisa aan ahmiyad weyn la siinin iyo inay tahay howl adag in xiddigaha sida Neymar iyo Mbappe iyagoo faraxsan lagu hayo caasimada Faransiiska.
Mbappe iyo Tuchel ayaa isku dhacay bishii Febraayo kulan ay la ciyaarayeen kooxda Montpellier laakiin weeraryahanka Faransiiska ayaa fariin aad u fiican u marsiiyay baraha bulshada tababarihiisii hore.
“Waxaa murugo ah inay tani tahay sharciga kubada cagta” ayuu Mbappe soo dhigay Instagram.
“Cidna ma ilaawi doonto waqtigaagii halkaan.
“Waxaa qortay qeyb cajiib ah oo ka mid ah taariikhda kooxda, waxaana kugu leeyahay mahadsanid tababare.”
Tuchel oo hore tababare uga soo noqday Mainz iyo Borussia Dortmund ayaa shaqada PSG kala wareegay Unai Emery bishii Juun 2018.
Waxaa laga badiyay kaliya 19 kulan 127 kulan uu kooxda hogaamiyay isagoo badiyay 95 kulan halka ay barbaro galeen 13 kulan.
YAAB: Ole Gunnar Solskjaer Oo Ku Eedeeyey Frank Lampard Inuu Sabab U Ahaa Rikoodhihii Laga Diiday Man United Kulankii Xalay Ee Chelsea
Xaqiiqooyinkii Laga Diiwaangeliyay Kulankii Chelsea & Man United, Xiddigii Garoonka & Qiimeynta Ciyaartoyda